खुट्टा हल्लाउने बानी छ? हृदयघात होला है « AayoMail
खुट्टा हल्लाउने बानी छ? हृदयघात होला है
खुट्टा हल्लाउने बानी एक प्रकारको रोग हो। यस बानीले विभिन्न किसिमका रोग तथा समस्या निम्त्याउँछ। कुर्सीमा बसिरहँदा यदि खुट्टा तथा औंलाहरु चलाउने बानी भए मुटु सम्बन्धी रोग हुनसक्ने अध्ययनले देखाएको छ। उक्त बानीले हृदयघात हुने सम्भावना दोब्बर गर्दछ। त्यसैले यस्तो समस्या भए आजै छोड्नुहोस्।
खुट्टा हल्लाउने बानीलाई ‘रेस्टलेस लेग सिन्ड्रोम (आरएलएस)’ रोग भनिन्छ। अध्ययनका अनुसार खुट्टा हल्लाउने मानिसहरुमा हृदयघात हुने सम्भावना दोब्बर हुन्छ भने निद्रा अभावका कारण पनि यस्तो समस्या हुन्छ।
हवार्ड मेडिकल स्कुल बोस्टनका डाक्टर जोन विकलम्यानका अनुसार आरएलएस भएका व्यक्तिहरुले सुत्नु अगाडि २ सयदेखि ३ सय पटक खुट्टा हल्लाउने गर्दछन्। यसले प्रेसर र मुटुको चाल बढाउँछ। पछि गएर मुटुका समस्याहरु आउने गर्दछ।
६८ वर्ष उमेर माथिका ३४ हजार मानिसहरुमा अनुसन्धान गरिएको थियो। उनीहरुमा आरएलएस र मुटुरोग तुलना गरिएको थियो। सात प्रतिशत महिला र तीन प्रतिशत पुरुषहरुमा यी दुई रोग एकअर्कासँग मेल खाएको पत्ता लागेको थियो।
यतिमात्र नभई आरएलएसको लक्षण र मानिसको उमेर, तौल, ब्लडप्रेसर र धुम्रपान गर्ने बानीलाई तुलना गर्दा हृदयाघात हुने सम्भावना दोब्बर रहेको पाइएको थियो। उक्त अध्ययन जर्नल न्युरोलोजीमा प्रकाशित गरिएको थियो।
किन हुन्छ यस्तो बानी?
मानिसहरुको खुट्टा चलाउने बानी आफैं हुँदैन। जब चिन्ता वा तनावमा हुन्छन्, तब खुट्टा चलाउन थाल्छन्। कोही सोच्दा खुट्टा हल्लाउँछन् भने कोहीले रक्सी सेवन वा धुम्रपान गर्दा हल्लाउने गर्दछन्।
खुट्टा हल्लाउने बानीलाई नकरात्मक रुपमा पनि लिइन्छ किनकि यसका कारण नकरात्मक सोच आउने गर्दछ।
मुटुरोग हुनुको कारण के?
विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार खुट्टा हल्लाउने बानीका कारण ब्लडप्रेसर बढ्ने गर्दछ। जसका कारण हृदयघात हुने सम्भावना बढ्दछ। व्यक्तिमा इन्सोमेनिया पनि हुन सक्छ।
यदि यस्तो बानी भए तुरुन्तै त्याग्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन्।